सोभियत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने मान्छे को पुरानो पुस्ता, परिवार, Sacco र Vanzetti (निकोला Sakko र Bartolomeo Vanzetti) परिचित, लगभग साथै जवान मान्छे Dolce र Gabbana परिचित छन् हालको पुस्ता हो (Domenico Dolce र Stefano Gabbana।)। को सुनुवाइ मा उपनाम, नायक र स्थिति को नाम संग त र अब जटिल थियो।
को काम पर्यावरण को निवासी, राजनैतिक खेल सिकार
हामी तथ्य हेर्न भने, कथा निम्नानुसार छ। दुई कार्यकर्ता, इटाली ले आप्रवासी (निकोला Sakko Torremaggiore फगगिया प्रान्तमा जन्म, 1888 देखि 1905 को त्यो घर मा बस्ने, र Bartolomeo Vatsetti 1891 मा पिडमन्ट जन्म), श्रमिक अधिकार लागि आन्दोलन को बस कुनै ज्ञात सदस्य थिए। उनि एक अराजकतावादी समूह «Circolo di अध्ययन Sociali» गर्न belonged। एक जुत्ता कारखाना Vanzetti fishmonger को चोरी को दिन मा सामान्यतया माछा पकडने यात्रा मा भएको। म जसको बयान खातामा लिएको छैन यो तथ्यलाई साक्षी, एक किशोर केटा थियो। Sacco र Vanzetti दुई दिन चोरी पछि पक्राउ परेका थिए। सबै व्यवस्था उल्लङ्घन थियो। किन प्रक्रिया गर्दछ र सबै दुनिया भर सार्वजनिक बढी र अझ बढी ध्यान आकर्षित गर्न थाले। निर्दोष कैदी को अधिकार को लागि पहिलो आन्दोलन को मृत्यु वाक्यको घोषणा गरेपछि ग्रह मात्रा प्राप्त।
यो लगभग एक सय वर्ष लाग्यो, र यो प्रक्रिया भन्दा अप्रिय को अमेरिकी अधिवक्ता गरेको एक लागि रह्यो र अमेरिकी कानुनी प्रणाली सम्झौता भएको छ। कुनै चिरपरिचित छैन इटालियन आप्रवासी निर्दोष कैदी सबै मानिसजातिको प्रतीक लागि भयो। हो, तिनीहरूले घटना "अन्तर्राष्ट्रिय एकता, Mayday" शिकागो मासु बूचडखानों मा जन्म भएको थियो भने यो थिएन श्रम आन्दोलन को साधारण सदस्य र जो त्यसपछि थिए। साथै, Sacco र Vanzetti जो छ, को पाठ्यक्रम, सोभियत schoolchildren थाहा थिएन anarchists थिए। र, पछि साबित भएको छ रूपमा, तिनीहरूले गरे, वा बरु तिनीहरूलाई को एक, अर्थात्, निकोला Sakko र भाग को आक्रमण र हत्या मा। आफ्नो स्पष्ट दोषी मा न्यायकर्ताहरूको मानिन्छ उपलब्ध पछि पहिचान भए तापनि योग्य अक्षरहरू निकोला आफ्नो छोरा डेन्ट गर्न झ्यालखानाबाट लेखे। यस्तो विचार प्रचार गर्ने मानिस हत्यारा हुन सक्दैन, वा त्यो संसारमा सबैभन्दा ठूलो कपटी छ।
तर, यो अब Sacco र Vanzetti थियो, तिनीहरू केवल न्याय लागि विश्वव्यापी संघर्ष को ब्यानर हुन्छन्। संसारभरिका लाखौं मानिसहरू तिनीहरूलाई लागि स्वतन्त्रता माग, को प्रदर्शन लगे, anarchists, को मेट्रो मा एक बम विस्फोट trams जलाए। यो 1927 सम्म, जो मामला समीक्षा भएको थियो लामो र दोस्रो दोषारोप, जो पछि, अगस्त 23 मा 22 को रात मा, उहाँले कार्यान्वयन थियो पेश गरियो। र वास्तवमा, के भइरहेको थियो को सार थियो? किन कम्युनिस्टों र Fascists tyranny को सिकार रक्षा, काँध गर्न काँध किन रूसीहरूले देशमा शहर दर्जनौं सडक Sacco र Vanzetti देखा (मुसोलिनी सक्रिय भाग मुक्ति मा लिए)? शायद, प्रक्रिया थियो, बिल्कुल, राजनीतिक।
वर्ष 1920 थियो। अन्य - अमेरिकी समाजमा, साथै विश्व मा, "रातो विपत्ति" को डर देश को असंतोष एक हात मा आप्रवासी द्वारा भरिएका छन् रूपमा ठूलो र कार्यकर्ता को क्रांतिकारी मुड थियो। एक demonstrative जस्मानी सजा आवश्यक। दक्षिण Braintree (मैसाचुसेट्स) त्यहाँ एक कोषाध्यक्ष र दुई गार्ड को हत्या एक जुत्ता कारखाना एक साधारण चोरी छ। को shoemaker गरेको Sacco र Vanzetti fishmonger - यो धेरै झूटा आरोप देखिन्थे रूपमा लागि, श्रम आन्दोलन लो। इटालियन आप्रवासी र काम वर्ग प्रतिनिधिको - तिनीहरूले पूर्ण फिट। Indignation संघीय अधिकारीहरु सुरक्षा को तर्क र समीक्षा लागि सबै माग अस्वीकार गर्दा आर्जित गर्न थाले।
रक्षा समझदार निष्कर्षमा समर्थकहरूको 4,00,000 डलर यसको लागत ढाक्न एकत्र भएको थियो। यसलाई त्यहाँ अभियोजन लागि मान्य आधार छ कि सिद्ध भएको छ। प्रक्रिया यो सजाय विशिष्ट आपराधिक ठेस लागि छैन कि धेरै देखिन्थे, राजनीतिक overtones लिन थाले, र आफ्नो विश्वास लागि। तर कुनै एक विश्वव्यापी indignation को यस्तो लहर अपेक्षा। 10,000 मानिसहरू जेल Charlestown आँधी र कैदीहरूलाई जारी गर्न प्रयास गरेका छन्। अब, यति धेरै वर्ष र विश्व हल्लाउँदै कि घटनाहरू पछि, भियतनाम मा अमेरिकी युद्ध विरुद्ध प्रदर्शन पछि, यो कठिन त आक्रोश कल्पना छ।
हामी सारा संसार लडेका
समाचार पत्र ग्रह पृथ्वीको काम वर्ग को धार्मिक indignation पूर्ण थिए। मात्र Resented कामदारहरूको संसारभरि जीवनको सबै चल्छ सबै महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कले एक retrial माग। जेल Sacco र Vanzetti मा सात वर्ष माफी योग्य र भन्नुभयो भन्ने तथ्यलाई पोप Pius XI। तब कसरी निर्दोष कैदी सोभियत मान्छे समर्थन सक्छ? protesters हजारौँ बन्द प्राप्त र राजनीतिक सडक सिकार सम्मानको भनिन्छ। र यो साँच्चै निष्कपट आवेग, एकता को विशाल अभिव्यक्ति थियो। तर त्यसपछि थियो, र अब के? यस सन्दर्भमा, यो निकोला Sakko र Bartolomeo Vanzetti, नेटवर्क मा आज जवान मान्छे को दुखद कहानी छलफल रोचक छ। एक जवान अवैध दोषी anarchists Sacco र Vanzetti काम को विषय समर्पित वेबसाइट खुलेको छ। जसले जीवनी द्वारा दूर र धेरै छक्क थियो जब उहाँले, पाठ्यक्रम, म सिकेका छ "सिक्न।" प्रश्न जवाफ "किन साइट खोलेको छ" - "। तिनीहरूलाई को गीत धेरै सुन्दर छन्" ताकि मानिसहरू कम ज्याला आप्रवासी को अधिकार को लागि लडाकूको स्मृति बस्ने।
इटाली, एउटै फिल्म 1971 मा, यो भनिएको थियो जसमा, यो कि हिट लागि हो जो प्रसिद्ध Sacco र Vanzetti, भन्दा त गरिएको थियो, र। रेकर्डो Kuchchiolu - विशेष गरी कलाकार Sacco को भूमिका उल्लेख टेप प्रसिद्ध निर्देशक Giuliano Montaldo, धेरै पुरस्कार सम्मानित गरिएको छ। म फिल्म दिग्गज Ennio Marrikone लागि "रजत रिबन" र सुन्दर गीतहरू लेखक पाए। प्रश्न गर्न "Sacco र Vanzetti - जो" थुप्रै तरिकामा जवाफ गर्न सकिन्छ। तर संसारभरिका लाखौं मानिसहरू को indignation के कारण सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, - अमेरिकी कानुनी सिस्टम को अन्याय हो। पहिलो वाक्य 1920 मा पारित भएको थियो। अहिलेसम्म त्यहाँ यो भियतनाम थियो, कुनै यातना शिविरहरूमा थियो। र त सडक मा पुगियो र लगाए मान्छे को भाग्य विद्युत कुर्सी, सारा संसार भड्काए।
सोभियत विद्यालयमा Pupils, सोध्न भएन "छ जसले Sacco र Vanzetti।" हामी कार्यकर्ता को अधिकार को लागि, न्याय को लागि लडाकूको रूपमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि विदेशी नाम धेरै सम्झिन। बच्चाहरु लोकप्रिय विदेशी शान्ति कार्यकर्ता पछि नाम थियो। कुनै इन्टरनेट थियो। जहाँ अधीक्षक Shvonder को सम्मान मा, कल बालिका "केवल" प्रदान गर्दछ मिखाइल Bulgakov, "एक कुकुर को हृदय" बारे रोजा लुक्सम्बर्ग र Klary Libkneht, हामी कहिल्यै सुने। को sanatoria, विद्यालय, राजमार्ग भनिन्छ सबै मानिसहरूका को समानता र भाइचाराको लागि लडाकूको सम्मान मा। यस विशेष अवस्थामा, नाम सुन्दर सुनिन्थ्यो - बाहिर Sacco र Vanzetti।
समय को नापसंद कल्पना गर्न, किन हाम्रो देश धेरै सडक मा बुझ्न। Sacco र Vanzetti, र बस एक राम्रो छ र एक उल्लेखनीय brilliantly को विवादास्पद प्रक्रिया वरिपरि स्थिति संग जोडिएको छ सबै कि conveys जो, एउटै नाम को फिलिम हेर्न आवश्यक समय खर्च गर्न। अब यी सडकमा पुन: नामकरण गर्न आवश्यकता वार्ता, यो काम सँग सम्बन्धित अनावश्यक लागत बावजुद छन्। अन्त मा, यी नाम मात्र सदैव अमेरिकी tyranny को indignation प्रतिनिधित्व, तर पनि रूसी मान्छे भलाइ, न्याय र निर्दोष सिकार को complicity को विचार बाँध्छ।
रूस को नायक
यो भावना अधिकांश मानिसहरू एकताबद्ध र सबैभन्दा निष्कपट थिए जब हाम्रो इतिहास, को भाग हो। त्यहाँ यस्तो कुनै cynicism थियो। यी भावना स्पेन जान स्वयंसेवकहरु सयौं नेतृत्व। Str। Sacco र Vanzetti - हाम्रो इतिहासमा एउटा स्मारक, र अमेरिकी वा इटालियन। बेलारुस मा रूस, 15 युक्रेनमा, काजकस्तान 3,4मा 38 सडकहरू, शायद एक बिट धेरै - हुनत, पाठ्यक्रम, रूसी परम्पराअनुसार सधैं "भुइँमा inflection बिन्दु" उपचार। तर पूर्व सोभियत गणराज्यहरु चिन्ता छैन - किनभने इटालियन थर, रूसी छैन पुन: नामाकरण छैन। खैर, रूस मा - प्रत्येक शहर वसोवास को मामला।
सुन्दर पुराना सडक
उदाहरणका लागि, साराटोभ। Sacco र Vanzetti - सबैभन्दा पुरानो एक र यसको आफ्नै इतिहास र साँचो प्रशंसकहरूसँग शहर को मुख्य सडकमा। नेटवर्क, शीर्षक "मेरो सडक" अन्तर्गत पूर्व Dmitrov बारेमा एक अद्भुत लेख "आफ्नो पत्नीको सल्लाहकारमा सरकारी खजान ऐ नाम भनिन्छ छ जो सेन्ट अलेक्जेन्डर Nevsky गिरजाघर ", त्यसपछि माइनर Gentry, ठूलो Kostridskoy पछि को घण्टी टावर निर्माण गर्न ठूलो योगदान गरे Dmitrieva। लेख बस यस मामला को सह-ओपरेटिव खेत "ग्लोब" मा कम्पनी को कार्यकर्ता को पहल, भवदीय 1927 मा शहर को सबै बासिन्दाहरू, समर्थित कसरी एउटा उदाहरण, पुरानो, सबै छ पाठ्यक्रम को एक नयाँ स्पष्ट, विशिष्ट र पूरा गर्ने आकांक्षाओं गर्न सडक नाम परिवर्तन बहुमत। त्यसैले, शहरको बासिन्दा, सारा देश संग एकता हो सक्रिय प्रसिद्ध प्रक्रिया छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। कि नाम सडक अन्तर्गत लगभग 90 वर्ष अस्तित्व यसको धेरै महिमित इतिहास प्राप्त। Sacco र Vanzetti - एउटै नाम साराटोभ संग गर्व सडक। यहाँ स्थित क्लिनिक, एक्लै छ। यो शहर राजमार्ग पनि दन्त क्लिनिक (घर 12) कम्पनी "वोल्गा-stomas, क्लिनिक № 8 (घर 51) मा pertaining मा छन्। यहाँ बाल शहर अस्पताल №2 (भवन 41) छ। अन्तर्गत №61 एक चिकित्सा परामर्श केन्द्र MMUP (नगर एकात्मक उद्यम चिकित्सा) छ जो शहर आत्म-समर्थन क्लिनिक, भर ज्ञात छ। Polyclinic एक विशेष स्थिति छ र 24 वर्ष को लागि अस्तित्व मा छ। अनन्त, एउटै नाममा ऐतिहासिक क्षेत्र र वोरोनिश शहर छ। शहर को एक ल्यान्डमार्क छ जो सडक, - Sacco र Vanzetti। मात्र ऐतिहासिक र वास्तुकला स्मारक को एक 14 पहिले यो नजिकका स्थित कन्या आश्रममा को सम्मान मा महान् भनिन्थ्यो छ। बासिन्दा यसलाई भनिन्छ ज्योतिको सडक - यो स्कूल, पहिलो छापाखाना र सार्वजनिक पुस्तकालय रखे।
एक धेरै को
त्यहाँ Sacco र Vanzetti अर्को पुरातन र सुन्दर सडक तर्फबाट छ। एकाटेरिनबर्ग नयाँ भवन सबै पक्षलाई घेरे। तर सडक मा यो धेरै सुन्दर घरहरू, जो को एक, व्यापारीहरू Agafurovyh को पूर्व घर, कार्यालय Tatarstan मा स्थित छ। अर्को घरमा व्यापारी जीवनको एक संग्रहालय छ। 1930 Usoltsevskaya सडक मा कामदारहरूको को अनुरोध मा पुन: नामाकरण भयो - कहानी नै छ। यो भनिन्छ Polkovskoy थियो पहिलो यहाँ एउटा घर निर्माण गर्ने रेजिमेन्ट नाम मा मान्छे, को सम्मान मा पनि पहिले। सादा र सरल। फिर्ता यसको अघिल्लो नाम "Usoltsevskaya" गर्न सडक यदि म जो नाम मतलब, यो initiators सोध्न चाहन्छु। यो सडक सुरक्षित क्षेत्र रूपमा मान्यता छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
विज्ञान Korolev को मास्को क्षेत्र शहर त्यहाँ। Sacco र Vanzetti - सडक5र 12 फर्श (1974) मा मुख्य रूप अपार्टमेन्ट भवन संग लाइन। साधारण आवासीय सडक, त्यहाँ एक स्कूल र जिम छ जहाँ।
प्राचीन मिश्र को विद्यालयमा सिकाउनुभयो बालकहरू जस्तै
Semiboyarshina के हो? समस्याहरूको को समय मा Semiboyarshina
Khodynka शोकमा: वर्णन, इतिहास, कारण, सिकार र नतिजा
फैशन: युरोप र रूस मा 20 औं शताब्दीको सुरुमा
व्लादिमीर Dolgopolov - को फुटबल क्लब "जेनिथ" को पौराणिक कथा
शीत युद्ध को संग्रहालय। "Taganka मा बंकर-42": फोटो र समीक्षा
कसले Pinocchio लेखे? बच्चाहरु कथा वा प्रतिभाशाली चकमा
विवरण र समीक्षा: रेखाचित्र प्रोजेक्टर बच्चाहरु
यस साईट माली लागि स्ट्रबेरी प्रजातिहरू